Maitiro ekudzivirira mameseji ekuteerera kubva mukuzvidzima iwo muMessage | IPhone nhau
Maitiro ekudzivirira mameseji ekuteerera kubva mukuzvidzima muMamessage
Chokwadi kupfuura mumwe wevaya varipo akashamisika kuona kuti mameseji anotumirwa kwaari kuburikidza neApple Messages app abviswa otomatiki. Mazuva ano zvakajairika kuti vanhu vatumire manotsi ekuteerera kuburikidza akasiyana mameseji maapplication, asi pavanodaro kubva paMessage app izvi zvinodzimwa mushure memaminetsi maviri ekuzvitamba.
Izvi, izvo zvinogona kuve mukana kune vakawanda, chinhu chakanyanya kunaka kune vamwe. Sezvo tichifunga kuti tiri mumotokari uye meseji yekuteerera inopinda, inoridzwa kuburikidza neCarPlay uyezve mumaminetsi maviri ichabviswa, saka kana vakatipa kero, nhamba yerunhare kana chero ruzivo rwakakosha isu tinogona kuibuda uye inozove nguva yekuikumbira futi.
Izvi zvinogona kugadziriswa kubva paMeseji Zvirongwa
Tinogona kutaura kuti mune zvese zviitiko zvakakosha ndechekuti mushandisi ndiye arikutarisira kana ane sarudzo yekuti aya meseji meseji abviswe otomatiki kana kwete, saka nhasi tave kuzoona zvatinofanira kuita kuti tigadzirise. Iyo idanho rakapusa asi rakavanzwa nekugadzirisa kwakawanda ...
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche vhura Zvirongwa pane iPhone. Zvino tinodzika pasi kusvikira tawana Mirayiridzo uye kamwe mukati tinofanirwa kudzika kusvikira tawana Meseji yekuteerera, nzvimbo painotaridza kwatiri "Kupera" uye "Simuka uteerere." Zvakanaka, isu tinongofanirwa kumisikidza sarudzo Usambofa uye ndizvozvo, nenzira iyi mameseji meseji anosvika kwatiri haazobvisiswe otomatiki, isu tichafanirwa kuve nemhosva yekuabvisa. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti iyi sarudzo inomisikidzwa kubva kuChinotangira pane ese maPhones, saka kana iwe uchida kuchengeta iwo meseji meseji ayo aunotumirwa kwauri iwe muMessage app, iwe unofanirwa kuimisa iyo manyore kuitira kuti urege kuirasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzivirira mameseji ekuteerera kubva mukuzvidzima muMamessage
Iyo wpp asudio mameseji vanozvidzima ivo pachavo mushure memazuva mashoma. Ungazvidzivirira sei?
Twitterrific uye Tweetbot kugadzirisa kukodzera iyo nyowani iPad Pro skrini
Aya ndiwo marambiro matsva ePad Pro Pro 2018 anodonha. Kutanga "kudonha bvunzo"